AutoCAD 2012 Goorma? - Gofumed
AutoCAD 2012 Goorma?
Febraayo, 2011 AutoCAD-AutoDesk
Gugaani waxaan arki doonaa nooca cusub ee AutoCAD 2012, wararka qaar ayaa naga dhigaya in ay u muuqdaan in ay durbaba aad u dhow. Ma aanan ogeyn wax badan oo aan ka fileyno, in ka badan waxa ay yihiin bulshooyinka Anglo-Saxon, iyo aniga saadaalin yar, filashadayda ayaa hadda waxay diiradda saareysaa waxa aan arki karno inay tahay sheeko ahaan AutoCAD WS taas oo ii haysa wax yar oo qibrad leh iyo qabsadeen.
Hadda waxaan ka tagayaa xiriirada 4 inay ka warqabaan imaanshaha AutoCAD 2012
1 Waxaad ka iibsataa AutoCAD 2011 waxaadna heli kartaa AutoCAD 2012 lacag la'aan
Tani waa dallacaadda AutoDesk ee lagu soo bandhigay Amazon, waxay quseysaa iibsiyada laga sameeyay bogga internetka iyo qiimaha aadka u dhow US $ 1,000. Waxay ka shaqeysaa habka qandaraas-bixinta, waana qaababka LT.
Ma ahan kuwa xun ee kuwa sugaya nooca 2012 inay yimaadaan oo ma sugi karaan wax intaas ka badan.
2. AUGIMEXCCA meel u dhow
Bulshadan weyn ee isku keena tabarucaadka dadka isticmaala Hispanic ee Mexico, Central America iyo Caribbean, hore u hadlay wuu istaagay, laakiin maaha qaybta caalamiga ah. Waxaan ognahay in hawlgabkaaga qayb ahaan uu yahay mid wanaajin kara inkastoo ay naga tagtay farqi weyn haddii aan tixgelino qadarka ilaha ay halkaas joogeen. Waxaan rajeyneynaa in soo laabashadaada ay fududeyneyso sawirada fiidiyeyaasha iyo isticmaalka waxtarka ee ku saabsan ujeeddada safarka; wax aan hubno, soo laabashadiisu waxay noqon doontaa kahor AutoCAD 2012.
3 Bulshada Hispanic ee isticmaalayaasha AutoDesk
Tani ayaa dhawaan la bilaabay, iyada oo la adeegsanayo ilo wanaagsan, isku xirnaanta iyo wararka. Hadda wixii ku jira barta Isbanishka waa yar yahay, laakiin sida forumka loo faafiyo laguna diiriyo waxaan lahaan doonaa wax badan. Waa goob xiiso leh si loo raaco jidka illaa iyo imaanshiyaha AutoCAD 2012, inkastoo aan helayo aragti ah in AUGI laga yaabo inuu halkaa u hirgaliyo sida Bentley uu ku sameeyay shabakadihiisa kala duwan (oo ay ku jiraan Askinga).
4 Ka soo qaad AutoCAD 2012 bilaash ah
Tani waxay la shaqaysaa Community AutoTeeting beta (hore Myfeedback), kaas oo kuu ogolaanaya inaad soo dejiso qaybo aan ahayn kama dambeys ah si loo tijaabiyo ka hor inta aan la sii deyn. Waayo, kanu waa in aad iska diiwaan gelin waxaa ka mid ah nooca barnaamijyada AutoDesk in lagu baaro, u qoraan nooca mashiinka aad leedahay si ay u tijaabiso iyo laba maalmood gudahood aan is a link la xidhiidha mashaariicda aan download version buuxa ujeeddooyin tijaabin
5 Aynu ka hadalno AutoCAD
Ugu dambeyntii, ma dhicin karo inaan sheego goobta naga tagtay oo aan ku qanacsanayn sida uu u soo bandhigay warka ah AutoCAD 2011. Waxaan u jeedaa Blog of Fernando MontañoAan ka hadalno AutoCAD, halkaas oo aan hubaal ka heli karno warar dheeraad ah oo ku saabsan imaatinka 2012 iyo dhammaan wixii qeexaya.
Qeybtaan waxaan soo bandhigi doonaa kan ugu horreeya Maxaa Cusub ee AutoCAD 2012.
Post Previous«Previous XYZtoCAD, iskuduwaha shaqada ee AutoCAD
Post Next Taasi waxay dib u soo celineysaa AutoCAD ws XUMNext »